Ahoana ny fomba fametrahana marketing ara-tsosialy amin'ny doka nentim-paharazana | Martech Zone
Tsy manohitra mihitsy ny dokam-barotra sy ny fandoavana ny fampiroboroboana aho, saingy tompona orinasa maro ary na ny mpivarotra sasany aza tsy manavaka ny mahasamihafa azy. Matetika, ny marketing ara-tsosialy dia hita ho hafa ihany fantsona. Na dia paikady fanampiny hanampiana ny varotrao aza izy io, ny fiaraha-monina dia manome fotoana hafa tsy mitovy.
Ny media sosialy dia nanelingelina ny tontolon'ny dokam-barotra nanomboka tamin'ny fotoana nipoahany tampoka ary nanolotra metatra azo zahana izay nofinofisin'ireo mpivarotra fotsiny. Miaraka amin'ny habetsaky ny UGC avoaka isan'andro, tsy misy isalasalana fa ny marketing ara-tsosialy dia sehatra sarobidy ho an'ny dokam-barotra lasibatra, ny fitarihana sy ny fifampiraharahana roa tonta. Brightkit, Ahoana ny fomba ahazoana tombony amin'ny Marketing sosialy
Ny dokam-barotra amin'ny ankapobeny dia tetikady fampahafantarana fa tsy paikadim-pifandraisana. Tsy afaka mamaly mivantana amin'ny dokambarotra amin'ny fahitalavitra na radio aho… na koa dokambarotra nomerika an-tserasera. Saingy afaka mamaly, mamerina na mamaly ny varotra sosialy aho. Ny haino aman-jery sosialy dia manolotra fomba mahomby sy mahomby indrindra hanampiana ny marketing amin'ny vava amin'ny tantara - ary tokony hiditra ao ny orinasanao. Ary koa, rehefa ritra ny famatsiam-bola fampielezan-kevitrao, dia toy izany koa ny dokanao. Saingy ny atiny zaraina amin'ny media sosialy dia mety haharitra an-taonany maro.
Tags: fahitana ny mpanjifasehatra nomerikamailakaFacebookdoka googleInstagramvarotra mitambatrataratrafmfifaninanana marketingfanatrarana faobemetatra azo refesinaPinterestSEOatiny azo zarainamarketing ara-tsosialyfifaninanana marketing ara-tsosialyfanatrarana ara-tsosialydokambarotra kendrenadoka nentim-paharazanaTwitterfifamofoana roavotoaty hita masotaranaka mitarika mafana